ကျွန်မတဖြေးဖြေး နေနိုင်လာတာပါ …. – Shinyoon
ကျွန်မတဖြေးဖြေး နေနိုင်လာတာပါ ….
January 2, 2021 by Shin Yoon
သတိတရနဲ့ ဆက်လာမယ့်ဖုန်းတွေမျှော်ရင်းက ကျွန်မတဖြေးဖြေး နေနိုင်လာတာပါ ….
ဂရုစိုက်နေတဲ့ကြားက..နေနိုင်သွားရအောင် ကျွန်မက အေးစက်မာကျောနေတဲ့ စက်ရုပ်မဟုတ်ဘူးလေ နှလုံးသားရှိတဲ့ သာမန်လူပါ ချစ်တတ်တယ် မုန်းတတ်တယ် ပြီးတော့ … ကျွန်မ လွမ်းတတ်တယ် နာကျည်းတတ်တယ် … ပြီးတော့ မိန်းကလေးလေ ဂရုစိုက်ခံချင်တယ်လေ …
ဆက်လာမယ်အထင်နဲ့ ဖုန်းတွေကို မျှော်ရင်းက ဆက်မလာတော့မှန်းသိလာတဲ့အခါ မျှော်ရင်းမောလာလိမ့်မယ် ပြီးရင် မခေါ်လဲ ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ စိတ်တွေနဲ့ အိပ်တတ်လာတာလေ… နေနိုင်သွားတဲ့အခါမှသာ နေနိုင်သွားလေခြင်းဆိုတဲ့ အပြစ်တွေတင်တတ်ကြတယ်
အဲ့လိုနေနိုင်သွားအောင် ပစ်ထားတဲ့သူက ပစ်ထားတဲ့သူက ပစ်ထားခဲ့တာကိုကျ သူတို့တွေမသိခဲ့ကြဘူးလေ … ဂရုစိုက်နေတဲ့ကြားက နွေးထွေးနေတဲ့ကြားထဲက ကျွန်မလျစ်လျူရှူနိုင်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး ဒီလိုပါပဲ … တစ်ခါတစ်လေကျတော့ တဖြေးဖြေးနေသားကျသွားမယ်လို့ပဲ ဆိုရမှာပေါ့ …
အရင်လိုသာ အမြဲတမ်းနွေးထွေးနေမယ်ဆိုရင် ကျွန်မလဲ အရင်လိုပဲ ပျော်ရွှင်မြဲ ပျော်ရွှင်နေမှာပေါ့… ဒါပေမယ့် ကိုယ်ထင်သလို ဖြစ်မလာတဲ့အခါ ကိုယ်အဆင်ပြေမယ့်နည်းကို ရွေးရင်း ဆက်မလာတဲ့ဖုန်းတွေကို မမျှော်တော့ပဲ နေဖြစ်သွားတာပါ ။
သတိတရနဲ႕ ဆက္လာမယ့္ဖုန္းေတြေမွ်ာ္ရင္းက ကြ်န္မတေျဖးေျဖး ေနနုိင္လာတာပါ ….
ဂရုစိုက္ေနတဲ့ၾကားက..ေနနိုင္သြားရေအာင္ ကြ်န္မက ေအးစက္မာေက်ာေနတဲ့ စက္ရုပ္မဟုတ္ဘူးေလ ႏွလံုးသားရွိတဲ့ သာမန္လူပါ ခ်စ္တတ္တယ္ မုန္းတတ္တယ္ ျပီးေတာ့ … ကြ်န္မ လြမ္းတတ္တယ္ နာက်ည္းတတ္တယ္ … ျပီးေတာ့ မိန္းကေလးေလ ဂရုစိုက္ခံခ်င္တယ္ေလ …
ဆက္လာမယ္အထင္နဲ႕ ဖုန္းေတြကို ေမွ်ာ္ရင္းက ဆက္မလာေတာ့မွန္းသိလာတဲ့အခါ ေမ်ွာ္ရင္းေမာလာလိမ့္မယ္ ျပီးရင္ မေခၚလဲ ဘာမွမျဖစ္ေတာ့ပါဘူးဆိုတဲ့ စိတ္ေတြနဲ႕ အိပ္တတ္လာတာေလ… ေနနိုင္သြားတဲ့အခါမွသာ ေနနိုင္သြားေလျခင္းဆိုတဲ့ အျပစ္ေတြတင္တတ္ၾကတယ္
အဲ့လုိေနနိုင္သြားေအာင္ ပစ္ထားတဲ့သူက ပစ္ထားတဲ့သူက ပစ္ထားခဲ့တာကိုက် သူတို့ေတြမသိခဲ့ၾကဘူးေလ … ဂရုစိုက္ေနတဲ့ၾကားက ေနြးေထြးေနတဲ့ၾကားထဲက ကြ်န္မလ်စ္လ်ဴရွဴနိုင္ခဲ့တာ မဟုတ္ဘူး ဒီလုိပါပဲ … တစ္ခါတစ္ေလက်ေတာ့ တေျဖးေျဖးေနသားက်သြားမယ္လုိ့ပဲ ဆုိရမွာေပါ့ …
အရင္လုိသာ အျမဲတမ္းေႏြးေထြးေနမယ္ဆိုရင္ ကြ်န္မလဲ အရင္လိုပဲ ေပ်ာ္ရႊင္ျမဲ ေပ်ာ္ရႊင္ေနမွာေပါ့… ဒါေပမယ့္ ကိုယ္ထင္သလုိ ျဖစ္မလာတဲ့အခါ ကိုယ္အဆင္ေျပမယ့္နည္းကို ေရြးရင္း ဆက္မလာတဲ့ဖုန္းေတြကို မေမွ်ာ္ေတာ့ပဲ ေနျဖစ္သြားတာပါ ။
ပန်းချင်းတူပေမယ့် ရနံ့ချင်းမတူကြဘူး … ဒီလိုပါပဲ မိန်းကလေးချင်းတူပေမယ့်လဲ တန်ဖိုးချင်းတော့ မတူကြဘူးလေ …